‘प्रेम गीत-२’ भन्दा अघि ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ किन हतार ? यस्तो छ पूजाको जवाफ
Sun, Apr 22, 2018 | 15:58:43 NST
काठमाडौं, चैत २१ – सिनेमा ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ को भदौमा रिलिज हुने सोचका साथ काम अघि बढीरहेको थियो । तर सिनेमाको रिलिज डेट अब अघि सरेको छ । अब ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ लाई दर्शकले असार ३० गतेदेखि नै हेर्न पाउने भएका छन् ।
सिनेमाको सम्पादनको केही काम पोखरामा नै भएको थियो । निर्माण टोलीले सँगै प्राविधिकहरु पनि लिएर छायांकन र सम्पादनको काम गरेकाले सिनेमा अगाडि रिलिज हुँदा पनि समस्या भने नपर्ने निर्मात्री तथा नायिका पूजा शर्माले जानकारी दिएकी छिन् । सिनेमाको एउटा गीतबाहेक अन्य सबै छायांकन भइसकेको छ । अब एक गीतको छायांकनका लागि निर्माण टोली मुस्ताङसम्म पुग्ने छ ।
निर्माण पक्षले सिनेमा राम्रो बनाउनमा कुनै पनि कसर बाँकी राखेको छैन । सिनेमाको लगानी नै एक करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको नायिका पूजा शर्मा बताउँछिन् । सुदर्शन थापाको निर्देशन रहेको यो सिनेमालाई सुदर्शन र पूजा मिलेर निर्माण गरेका हुन् । ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ मा पूजा शर्मा र पल शाहले पहिलो पटक स्क्रिन सेयर गरेका छन् ।
‘म यस्तो गीत गाउँछु’ किन सर्यो त अगाडि ?
निर्मात्री तथा नायिका पूजा शर्मालाई सिनेमा रिलिजमा किन हतार गर्नुभयो ? भनेर हामीले सोध्दा जवाफमा भन्छिन्, ‘हामीले खास भदौमा रिलिज गर्ने सोचेका थियौँ । तर भदौका सबै दिनहरु प्याक भएपछि हामीले अगाडि सार्नु परेको हो । फेरि दसैँ तिहार भन्दा पछाडि जानु हामीलाई उचित लागेन । फिल्म बनाएर थन्क्याउनु भन्दा प्रदर्शन गर्नु नै राम्रो भनेर अघि सरेका हौँ ।’
सिनेमाको लागि पूजाको जन्मदिन विशेष
सुदर्शनले निर्माण गरेका सिनेमाको लागि पूजाको जन्मदिन विशेष रहने गरेको छ । सिनेमा ‘अझै पनि’ निर्माण गर्ने समयमा सुदर्शनले पूजाको जन्मदिन पारेर उपहार स्वरुप सिनेमाको घोषणा गरेका थिए । त्यस्तै यस पटक पनि सिनेमाको प्रमोशनको सुरुवात पनि पूजाको जन्मदिन वैशाख १७ गते देखि हुने पूजाले जानकारी दिएकी छिन् ।
‘प्रेम गीत-२’ भन्दा अगाडि ‘म यस्तो गीत गाउँछु’
सिनेमा ‘प्रेम गीत’ बनाएर निर्माता सन्तोष सेन, निर्देशक सुदर्शन थापा, कलाकारहरु पूजा शर्मा र प्रदीप खड्का लगायतको समूहले दर्शकको साथ र प्रशंसा बटुलेको थियो । यो सिनेमापछि दर्शकहरुले पूजा शर्मा र प्रदीप ख्ड्काको जोडीलाई खुबै रुचाए । तर पछि विभिन्न कारणले यो समूह एकअर्काबाट अलग भयो । एउटा समूह दुई भागमा विभाजन भयो । निर्देशकले अभिनेत्रीलाई लिए भने निर्माताले अभिनेतालाई । पूजा र सुदर्शनले सिनेमा ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ बनाउन थाले । सन्तोष सेन र प्रदीप खड्काले पनि ‘प्रेम गीत-२’ को सिक्वेलमा बनाए ।
एकअर्काबाट अलग भएर आफ्नो-आफ्नो काम गरिरहेका यी कलाकारहरु फेरि पनि एकअर्काको नजिक नजिक हुन पुगेका छन् । किनकी ‘प्रेमगीत-२’ साउन १३ मा रिलिज हुँदैछ भने ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ असार ३० मा । ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ को प्रदर्शन मिति ‘प्रेमगीत-२’ को भन्दा अगाडि आउने खबरसँगै सिने नगरीमा तरंग पैदा भएको छ ।